धरतीका नयाँ फुलहरु - Baikalpikkhabar
धरतीका नयाँ फुलहरु
प्रत्येक पिढीमा त्यस्तो भइरहन्छ । नयाँनयाँ कोपिलाहरू जन्मन्छन् । उनीहरूले आफ्ना साथमा नयाँनयाँ भविष्य ल्याउँछन् । संसारमा एउटा नयाँ चित्र कोरिन्छ । केही समयपछि उनीहरू जान्छन् । फेरि नयाँ पिढी आउँछ । उनीहरूले आफ्नो साथमा नयाँ भविष्य ल्याउँछन् । समाजको स्वरूप बदलिन्छ । प्रत्येक पिढीमा समाजको स्वरूप बदलिन्छ । संसारले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दछ । त्यो क्रम शताब्दियौँदेखि चल्दै आएको छ र भविष्यमा पनि अनन्तसम्म चलिरहने छ । हामीले नयाँनयाँ पिढीमा अन्तर्नि्हित शक्ति प्रकट भएर संसारमा परिवर्तन भएको कुरा सधैँ देख्न सक्दैनौँ । त्यो महसुस गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ । तर कुनै नदीको पानीमा लगातार परिवर्तन भएजस्तो । बाहिरबाट हेर्दा हामीले सधैँ एउटै पानी देखे पनि त्यहाँ सधैँ नयाँनयाँ पानी बगेर आए जस्तै संसार स्थिर छ तर त्यो स्थिरतामा परिवर्तन पनि अन्तरनिहित छ ।
बगै‌ंचामा फुल्ने प्रत्येक फूलमा सामान्यतः एक प्रकारको विशेषता हुन्छ । बगैँचामा कुनै एक प्रकारको फूलको जातिका फूल रूप वा सौन्दर्य सामान्यतः एक प्रकारले हुन्छ । मानव समाजमा, फुल्ने फूलहरूमा यस्तो हुन्न । उनीहरू बेग्लाबेग्लै प्रकारले फुल्दछन्
बालबालिकाहरू एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई परिवारको मद्दत चाहिन्छ । समाजको मद्दत चाहिन्छ । उनीहरू भविष्यमा कस्ता बन्नेछन् ? उनीहरूले कुन प्रकारको जीवन बिताउने छन् वा समाजमा उनीहरूले कुन प्रकारको योगदान दिनेछन् ? त्यो कुरा उनीहरूले मात्र फैसला गर्दैनन् । जुन परिवार वा समाजमा, जुन सामाजिक वातावरणमा उनीहरू हुर्कन्छन् तिनीहरू अरू धेरै कुराहरूले उनीहरूको जीवनको दिशा, उनीहरूको भविष्यको गति र स्वरूपलाई निर्धा्रित गर्दछन् । निश्चय नै, काफी हदसम्म, सम्पूर्ण रूपले होइन । उनीहरूभित्र अन्तर्नि्हित क्षमता, विशेषता वा प्रतिभाले पनि उनीहरूको जीवनको दिशामा वा भविष्यमा नयाँनयाँ आयामहरू थप्दछन् । बगै‌ंचामा फुल्ने प्रत्येक फूलमा सामान्यतः एक प्रकारको विशेषता हुन्छ । बगैँचामा कुनै एक प्रकारको फूलको जातिका फूल रूप वा सौन्दर्य सामान्यतः एक प्रकारले हुन्छ । मानव समाजमा, फुल्ने फूलहरूमा यस्तो हुन्न । उनीहरू बेग्लाबेग्लै प्रकारले फुल्दछन् ।
एउटै घरमा एउटै आमा बाबुबाट जन्मने सन्तानहरू बेग्लाबेग्लै रूपमा देखा पर्न सक्छन् । बालबालिकाहरू बगैँचामा फुल्ने फूलमाभन्दा बेग्लै प्रकारले फुल्ने गर्दछन् । उनीहरूमा स्वयं आफूभित्रको चेतना, विचार वा विवेकका आधारमा बाल बालिकाहरूले आफ्ना लागि जीवनका बेग्लाबेग्लै दिशाहरू निर्धा्रित गर्न सक्दछन् । निश्चय नै, त्यसो गर्नका लागि उनीहरू पूरै सक्षम हुन्नन् । पूरै स्वतन्त्र हुन्नन् । परिवार, समाज वा, संसारको सम्पूर्ण परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर नै उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । एकैसाथ उनीहरूले आफ्नो जीवनको दिशा निर्धा्रित गर्ने आन्तरिक क्षमता पनि राख्दछन् तर अर्का्तिर त्यो आन्तरिक क्षमता समाजको परिस्थितिद्वारा पनि निर्धा्रित हुन्छ । त्यसरी उनीहरूको स्वतन्त्रता र नियन्त्रण दुवै एक अर्का्सित सम्बन्धित हुन्छन् । दुवैले एकअर्कालाई नियन्त्रित गर्दछन् । दुवैका बीचमा सम्बन्ध हुन्छ । त्यसका साथै तिनीहरूका बीचमा अन्तर्विरोध पनि हुन्छ र ती दुवैका बीचमा सन्तुलन पनि हुन्छ ।
एउटा शिक्षाविद्ले कुराकानीमा बताएका थिए स् सरकार वा शिक्षा संस्थाहरूले ठूलो पैमानामा लगानी गरेर जुन शिक्षित समुदायहरू उत्पादन गर्दछन् । तिनीहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्याले विदेशमा पलायन गर्दछन् र तिनीहरूबाट देशले कुनै फाइदा लिन पाउँदैन । त्यसरी देशबाट पलायन गरेर विदेशमा बसोबास गर्नुलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनको ठूलो सफलता ठान्छन् ।
समाजमा थुप्रै व्यक्तिहरू डाक्टर, इन्जिनियर, ठूला अफिसर आदि बनेका हुन्छन् । उनीहरू सबैले त नभनौँ, कैयौँले समाज वा देशको सेवा पनि आफ्नो उद्देश्य बनाएका हुन्छन् । तर धेरैजसोले आफ्नो जीवनको उद्देश्य पैसा, व्यक्तिगत लाभलाई नै बनाएका हुन्छन् । शिक्षित व्यक्तिहरूले उच्च पेसा, उच्च जीवनको आशा गर्छन् । त्यसलाई हामीले गलत मान्दैनौँ । तर त्यो अवस्थामा पनि देश, समाज वा जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई पूरै उपेक्षा गर्नु सही हुन्न, तर कतिपयले आफ्नो उच्च पेसा वा जीवनका लागि देश, जनता वा समाजलाई पूरै उपेक्षा गर्ने वा उनीहरूको हितमाथि कुठाराघात गर्ने गरेको पाइन्छ । डाक्टरहरूद्वारा बिरामीहरूका किड्नीहरू निकालेर पैसा कमाउने प्रयत्न, नक्कली औषधीहरूको व्यापार । इन्जिनियरहरूद्वारा कम गुणस्तरका सामानहरूको प्रयोग, अफिसरहरूद्वारा ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार, उच्च जीवनको ठूलो कमाइका लागि विदेशमा गएर बसोबास गर्ने देशलाई पूरै उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आदि । एउटा शिक्षाविद्ले कुराकानीमा बताएका थिए स् सरकार वा शिक्षा संस्थाहरूले ठूलो पैमानामा लगानी गरेर जुन शिक्षित समुदायहरू उत्पादन गर्दछन् । तिनीहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्याले विदेशमा पलायन गर्दछन् र तिनीहरूबाट देशले कुनै फाइदा लिन पाउँदैन । त्यसरी देशबाट पलायन गरेर विदेशमा बसोबास गर्नुलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनको ठूलो सफलता ठान्छन् ।
देशको कसरी सुधार हुन्छ ? त्यो कुरालाई ठीकसित बुझ्न देश किन पिछडिएको छ ? त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने हाम्रो देशको विकासका लागि व्यापक सम्भावनाहरू छन् । हाम्रो देश संसारको एउटा अत्यन्त उन्नत र विकसित देश बन्न सक्दछ । कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन आदि विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकासका लागि देशमा व्यापक सम्भावनाहरू छन् । हाम्रो देशमा सगरमाथासहित कैयौँ उच्च हिमशिखर र हिमालयको एउटा लामो शृङ्खला नै छ । हाम्रो देश पहाडहरूले भरिएको छ । वन, जङ्गल, नदी नाला आदिका कारणले हाम्रो देश प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त सुन्दर र रमणीय छ । देशमा जातीय र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले पनि धेरै नै धनी र सम्पन्न छ । त्यो अवस्थामा पर्यटकीय दृष्टिले मात्र पनि हाम्रो देश संसारको एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्न सक्दछ । हाम्रो देश जलसम्पदाका दृष्टिले संसारको सबैभन्दा धनी देशमध्ये एउटा हो । त्यसको आधारमा सिंचाइ, कृषि, उद्योग, घरेलु उद्योग, पर्यटनको समेत धेरै नै विकास हुन सक्छ । हाम्रो देशमा कृषियोग्य जमिन प्रशस्त छ । कृषिको विकासको धेरै सम्भावना छ । हाम्रो देशमा वनजङ्गल छन् । त्यसका आधारमा एकातिर जडिबुटी उद्योग र अर्का्तिर काष्ठ उद्योगको धेरै नै विकास हुन सक्दछ । हाम्रो देशमा खानीहरू धेरै पत्ता लागेका छैनन् । तर अनुसन्धान गर्ने हो भने ग्याँस, पेट्रोल, युरेनियम, फलाम, तामा आदि कैयौँ खानीहरू पत्ता लाग्न सक्दछन् । हाम्रो देशको श्रमशक्ति विश्वमा छरिएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा देश विकासमा अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । राजधानी र देशका ठूला सहरहरूमा बनेका भव्य भवनहरू, सडकमा दगुरिरहेका मोटरकारहरूको ताँती, ठूला पाँचतारे होटलहरूको विलासी जीवनशैली, ठूलाठूला अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका बोर्डिङ स्कुलहरू, अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका अस्पतालहरू, कैयौँ नयाँ खुल्दै गइरहेका उद्योगहरू, कैयौँ ठूलाठूला परियोजनाहरू– यी सबै हेर्दा देशमा धेरै नै विकास भइरहेको देखिन्छ । तर वास्तविक स्थिति त्यो होइन, जो बाहिरी र उपरी रूपमा देखिन्छ । समग्र रूपमा देश धेरै नै पिछडिएको छ, गरिब छ । आखिर कुन कारणले देशको विकास र जनताको सुखी जीवनमा बाधा पुगेको छ ? त्यसको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसको निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिनदिनै सञ्चार माध्यमकहरूले करोडौँ, अरबौँ भ्रष्टाचार भएका समाचारहरू बाहिर ल्याउने गर्दछन् । प्रशासनयन्त्रमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार छ । त्यसले गर्दा देशको राजस्वबाट उठेको रकम, विदेशीबाट प्राप्त सहायता वा ऋण, विभिन्न योजना, विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याणसित सम्बन्धित कार्यहरूमा लागानी हुने रकम समेतको ठूलो अंश भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । विदेशी पुँजीको प्रभुत्वको कारणले पनि उद्योगधन्दाको विकास कुण्ठित हुन्छ ।
गत दशकहरूमा समाजको धेरै विकास भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । इतिहासका प्रत्येक कालखण्डमा पहिलेको तुलनामा एक वा अर्को प्रकारले समाजको विकास केही न केही अगाडि बढेको हुन्छ । त्यही प्रकारले पहिलेका तुलनामा अहिले हाम्रो समाजको पनि केही न केही विकास भएको कुरा प्रष्ट छ । तर हामी खालि पहिलेको तुलनामा भएको विकासमा मात्र सन्तुष्ट हुनु हुन्न । विकासका लागि कुनै प्रयत्न नगरीकन वर्तमान व्यवस्थाभित्र आफ्नो लाभ वा क्यारिएरका लागि मात्र प्रयत्न गर्नु सही सोचाइ होइन । हाम्रो व्यक्तिगत लाभ वा हाम्रा सन्तानका लागि पनि समाजको विकास आवश्यक छ । समाजमा परिवर्तन, विकास स्वस्फूर्त रूपले भएर मात्र पुग्दैन । कुनै देशको विकास उच्च प्रकारको सिद्धान्त दूरदृष्टि वा चेतनाद्वारा निर्दे्शित हुनुपर्दछ । विकासका लागि वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । जुन विचारहरूले वर्तमान अवस्थामा परिवर्तनमा जोड दिन्छन्, उनीहरूले नै परिवर्तन र विकासको प्रवाहलाई गति दिन सक्छन । त्यसकारण हामीले बालबालिका, विद्यार्थी वा नयाँ पिढीमा प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी दर्शन, सिद्धान्त र विचारको चेतना दिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ जसबाट उनीहरू समाजको परिवर्तन र विकासको दिशामा अग्रसर हुन सकून्
सोमबार, १६ भदौ, २०७६, दिउँसोको १२:०३ बजे